I-Black Friday Xiaomi: sebenzisa lezi zinhlinzeko ezinhle | Iforamu yeselula
I-Black Friday Xiaomi: sebenzisa lezi zinhlinzeko ezinhle kakhulu
U-Ignacio Sala | 25/11/2021 09:32 | Kubuyekezwe ku- 26/11/2021 07:39 | Ukuthenga Imihlahlandlela
I-Black Friday yiyona isikhathi esihle sonyaka ukwenza noma yikuphi ukuthengwa kwemikhiqizo yezobuchwepheshe njengoba kusivumela ukuthi songe imali eningi, uma sisebenzisa ngokunenzuzo okunikezwayo kahle. Uma ufuna ukusizakala ngezipesheli ze-Black Friday, ngokuqinisekile ngeke ukwazi ukuphuthelwa okunikezwayo kwe-Xiaomi esikubonisa ngezansi:
Yonke imikhiqizo esikubonisa yona kulesi sihloko zithunyelwa zisuka eSpain, ngakho, ezinsukwini ezimbalwa nje, siyokwazi ukuzijabulela.
1 I-PAD yami 5 isuka kuma-euro angama-308,99
2 I-F3 encane isuka kuma-euro angama-233,49
3 I-Redmi 9A ngama-euro angama-70,59
4 I-My Air Purifier ngama-euro angama-80,99
I-PAD yami 5 isuka kuma-euro angama-308,99
I-Xiaomi MiPAD 5 ingelinye lamathebulethi ane inani elifanele imali okwamanje etholakala emakethe. Ngaphakathi, kukhona iprosesa I-Snapdragon 860 kusuka ku-Qualcomm, kanye nebhethri engu-8270 mAh kanye ne-a Isibonisi esingu-2Hz 120K lokho kuzosinika uketshezi esingakaze sikubone ngaphambili kuthebhulethi kanye nezipikha ezi-4 ezihlanganisayo.
I-Mi PAD 5 itholakala ngezinhlobo ezimbili:
I-6 GB ye-RAM ne-128 GB isitoreji nge I-308,99 euro
I-6 GB ye-RAM ne-256 GB isitoreji nge I-352,99 euro
Uma ufuna sebenzisa leli thuba futhi uthenge i-Mi PAD 5 ngalesi saphulelo esihle, ungakwenza ngokusebenzisa lesi sixhumanisi nokusebenzisa isigqebhezana AEBF43.
I-F3 encane isuka kuma-euro angama-233,49
I-Poco F3 5G ingenye yamaselula anenani elingcono kakhulu lemali esinayo. Ngaphakathi, kukhona iprosesa I-Snapdragon 870 kusuka ku-Qualcomm, iphrosesa ephinde ihlanganise i-a I-5G chip futhi itholakala ngezinguqulo ze-RAM ezingu-6 nezingu-8.
Isikrini, thayipha I-AMOLED, isinikeza Isilinganiso sokuvuselela esingu-120 Hz futhi ihlanganisa izikhulumi ezimbili ezihambisana ne-Dolby Atmos.
Intengo ye-Poco F3 5G nge I-6 GB ye-RAM ne-128 GB isitoreji kuyinto I-233.49 euro.
Intengo ye-Poco F3 5G nge I-8 GB ye-RAM y 256 GB isitoreji kuyinto I-251.99 euro.
Ungakwazi thenga i-Poco F3 5G ngokusebenzisa lesi sixhumanisi ngekhuphoni AEBF43.
I-Redmi 9A ngama-euro angama-70,59
Uma ushoda kancane ngesabelomali noma awufuni ukuchitha imali eningi Ku-smartphone entsha, inketho ethokozisayo okufanele icatshangelwe yi-Redmi 9A, i-smartphone ene I-2 GB ye-RAM ne-32 GB yokugcina Inesikrini esingu-6,53 inch kanye nebhethri engu-5.000 mAh.
Ungasebenzisa leli thuba futhi thenga iRedmi 9A ngama-euro angama-70,59 ngokusebenzisa lesi sixhumanisi ngekhuphoni BFZBANX9.
I-My Air Purifier ngama-euro angama-80,99
Uma ufuna hlanza ukungcola, impova, amagciwane kanye namagciwane avela emoyeni ekhaya lakho, Isixazululo senani lekhwalithi engcono kakhulu sitholakala kusihlanzi se-Mi Air. Lesi sihlanzi sifaka isihlungi esisebenza kahle kakhulu esinikeza amalitha angama-5330 omoya ocwengiwe ngeminithi esisebenza kahle esifinyelela ku-102 m2 / h.
Ngaphezu kwalokho, iyahambisana nomsizi weGoogle kanye nomsizi we-Alexa. Ukuze uthenge Isihlanzwami Somoya ungakwenza ngokusebenzisa lesi sixhumanisi ngama-euro angu-80,99 kuphela nokusebenzisa isigqebhezana esiphakanyisiwe ngaphakathi kwe-Aliexpress.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Ukuthenga Imihlahlandlela » I-Black Friday Xiaomi: sebenzisa lezi zinhlinzeko ezinhle kakhulu
Ungakuthuthukisa kanjani ukuxhumeka kwe-Intanethi ku-PS4
I-Steam VR: kuyini, ukuyifaka kanjani nemidlalo eyinhloko